Otu ahụ na-ahụ maka nhọpụta ọchịchị na ntụli aka n'ala anyị bụ INEC n'aha ịchafụ ekwuola na o nweghị ihe ọbụla ga-eme ka e bugharịa nhọpụta ọchịchị ahụ a ga-eme na steeti Anambra, bụ nke ga-ewere ọnọdụ n'abalị iri na asatọ nke ọnwa a.
Onyeisi oche otu ahụ na steeti Anambra bụ Dọkịnta Nwachukwu Ọjị mere ka a mara nke a oge ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ mkparịta ụka a chịkọbara, bụ nke dọtara mkpokọta òtù ndị nkịtị karịrị iri asaa n'ọnụ ọgụgụ, ma sịkwa na o nwere ezi olile anya na otu ahụ adịla njikere ma debezukwa akụrụ ngwa a ga-eji wee me ya bụ ntụli aka iji hụ na ọ gara n'ụzọ ghe anya oghe.
Otu ọ dị, maazị Ọjị kwara arịrị na na-agbanyeghị na ọ fọdụrụ ihe erughị izu ụka abụọ ka ụbọchị a ga-atụ akwụkwọ ruo, na ọtụtụ ndị na-atụ akwụkwọ na steeti ahụ agabeghị were akwụkwọ ikike ọkpụtọrọkpụ ha ji atụ akwụkwọ.
O kwuru na INEC rụpụtara akwụkwọ ikike ọkpụtọrọkopụ ọhụụ ruru narị puku abụọ na atọ, bụ nke e kesara ihe ruru puku iri ise na anọ n'ime mkpụrụ ụbọchị atọ e jiri malite ikesa ya.
Onye isi INEC ahụ mekwara ka a mara na ha rụpụtakwuru akwụkwọ ikike ọkpụtọrọkpụ dị puku iri anọ na ise n'ọnụ ogụgụ maka ndị enweghị ike idebanye aha mgbe a malitere ya n'oge mbụ. Ọ sị na ya nwere ezi olile anya na tupuu ụbọchị a ga-atụ akwụkwọ eruo, na ha ga-ekesa ihe ruru otu n'ime atọ, na mkpokọta akwụkwọ ikikeọkpụtọrọkpụ niile ahụ, ma sikwa na ha abagidela n'amụma ịkụziri ọhanaeze mkpa ọ dị ịga were akwụkwọ ikike ọkpụtọrọkpụ ha ma nuputakwa n'igwè sonyesie ike na ntụli aka ahụ.
Ka ọ na-aza ajụjụ ọnụ a gbara ya, maazị Ọjị kwunwekara ọzọ na o nweghị oge ọbụla ha ji akpa nkita ibugharị nhọpụta ahụ ka ọ dịbazie ụbọchị ọzọ, beere naanị ma e nwere ọnọdụ mberede dapụtara banyere nke ahụ, bụkwa nke ọ sị na o cheghị na o nwere ike ịdapụta.
O kwuru na ọ bụ nnukwu asị kwọ nwa, bụ akụkọ ahụ ndị mmadụ na-akọ, na ndị na-egwu okwe ndọrọ ndọrọ nwere ike ịbịa nye ha aka azụ iji wee turu ugo na nhọpụta ahụ, ma sị na nke ahụ apụghị ime chaa chaa maka na o nweghị mmadụ ma ọ bụ otu pati ọbụla pụrụ ime nke ahụ.
N'akụkụ nke ya, osote onyeisi ndị uwe ojii na steeti Anambra, bụ maazị Mike Okoli mere ka a mara na nzite ahụ e zitere mkpụ ndị uwe ojii ngagharị ruru iri abụọ na atọ n'ọnụ ọgụgụ na steeti ahụ site n'aka onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị enyela aka ibelata ohi na mpụ na steeti ahụ. Ọ sịkwazị na nke ahụ emeela ka ndị mmadụ kwere ma ghọta ụdị njikere ndị ọrụ uwe ojii dị ịhụ na ntụli aka ahụ gara nke ọma, na e nweghịkwa nsogbu nke ụdị ọbụla, tupuu, mgbe a na-eme, ma ọ bụ mgbe e mechara nhọpụta ahụ.
Maazị Okoli sịkwa na mkposa ahụ e kposara ndị otu IPOB enyela aka kwalite ezi ọnọdụ nchekwa na udo dị na steeti ahụ, tinyekwuoro na amụma egwu eke nke abụọ ahụ ewetela n'isi njedobe, nsogbo ịkpọ ganị ganị niile ahụ na-ewerebụ ọnọdụ na steeti ahụ na na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị n'izugbe.
N'okwu yiri ibe ya, maazị Okoli gọkwara aka na ọkpa ya banyere akụkọ ahụ a na-akọ na ụfọdụ ndị ahụ na-egwu okwe ndọrọ ndọrọ na-eji ndị ọrụ uwe ojii arụ ọrụ iyi egwu mmegide ụfọdụ ndị ọzọ ha na ha na-azọkọ ọkwa ahụ, ma ọ bụ ndị otu pati ọzọ. O kwuru na nke ahụ bụ nnọọ nnukwute asị ọcha, n'ihi na ha ahụtabeghị ma ọ bụ nụ ụdị ihe ahụ, tinyekwuoro na nke ahụ esoghị n'ọrụ ndị uwe ojii.
O mezịkwara ka a mara na ha adọọla ndị ahụ na-egwu okwe ndọrọ ndọrọ aka na ntị, ka ha gbaa mbọ hụ na ha mere nke ahụ n'ịgbaso ụzọ iwu kwadoro nakwa n'ụzọ nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ.